vol ။ 16 ဒီဇင်ဘာ, 1912 ။ အမှတ် 3
အိုင်တီသည်ဆောင်းရာသီနေရောင်ခြည်၏အစဖြစ်သည်။ အရှေ့တောင်ဘက်ရှိအလင်းတန်းများသည်ည၏စစ်တပ်ကိုမောင်းနှင်ပြီးထိုအရှင်၏မြင့်တက်လာခြင်းအကြောင်းပြောပြသည်။ နေ့သည် ၀ တ်ရသောနေ့နှင့်နှစ်အရှည်ဆုံးအရိပ်အဖြစ်တိမ်များစုဝေးကြသည်။ သစ်ပင်များသည်ရှင်းလင်းပြီး၊ အရည်မှာမကျသဖြင့်မြုံနေသောမြေများကိုနှင်းခဲများပေါက်စေသည်။
ညချမ်းလာတယ်။ မို်းတိမ်သည်မိုlead်းကောင်းကင်ကိုခဲအမိုးခုံးအဖြစ်ပြောင်းလဲစေပါသည်။ လေသည်သေစေလောက်သောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်သည်။ အနောက်ဘက်တောင်ဘက်ရှိမြေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အနည်းငယ်သောနေရာ၌မီးခိုးရောင်ကောင်းကင်သည်စင်မြင့်ပေါ်မှတက်သည်။ သေဆုံးသွားသောကောင်းကင်ဘုရင်သည်ခရမ်းရောင်ဗားရှင်းဖြင့်ဝတ်ဆင်ထားသောမီးကမ္ဘာလုံးသည်ဝေးလံသောတောင်ကုန်းများကြားချိုင့်ဝှမ်းတစ်လျှောက်တွင်တုန်ခါနေသောအာကာသထဲသို့နစ်မြုပ်သွားသည်။ အရောင်များမှေးမှိန်; သူ့ကိုအထက်တွင်အနီးကပ်ခဲ - တိမ်; လေသည်လည်းသေတတ်၏။ မြေကြီးသည်အေး၏။ အလုံးစုံတို့သည်မှောင်မိုက်၌ဖုံးလွှမ်းကြ၏။
၎င်း၏ပြီးခဲ့သည့်နှစ်၏အချိန်အဖြစ်ဆိုးပြီးဆုံးခဲ့သည်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်သောလူသည်ကြည့်လိုက်သည်နှင့်၎င်းတွင်ဘဝ၏အဖြစ်ဆိုးနှင့်သူ၏ခန့်မှန်းချက်ကိုတွေ့ရသည်။ အဆုံးမဲ့ဘဝနှင့်သေခြင်း၌ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်အချည်းနှီးဖြစ်ကြောင်းကိုသူမြင်ပြီးသူအပေါ်တွင် ၀ မ်းနည်းမှုသည်ကျဆင်းလာသည်။ သူသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအလေးချိန်ကိုလျစ်လျူရှုပြီးအိပ်မက်ခြင်းကိုမေ့ပျောက်နိုင်သည့်အိပ်မက်မက်မှုကိုဖြတ်သန်းခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့သူမလုပ်နိုင်ဘူး။ လူသားတို့၏ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောငိုကြွေးမှုသည် ၀ မ်းနည်းခြင်း၏မှေးမှိန်ခြင်းကိုချိုးဖဲ့သည်။ သူသည်ကြား၏။ ယုံကြည်ခြင်း၏ဆုံးရှုံးမှုများ၊ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုပျက်ပြားခြင်း၊ ကျေးဇူးကန်းမှု၊ အရေခြုံမှု၊ သူ၏နှလုံးသား၌ဤအရာများမရှိချေ။ သူသည်ကမ္ဘာ၏ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုများကိုခံစားရသည်။ လူသည်လူမြင်ရန်၊ ကြားရန်၊ ပြောဆိုရန်အတွက်လူ၏အော်ဟစ်သံကိုလူကိုယ်တိုင်ကြားရသည်။ အတိတ်၏ဘဝများနှင့်သူ့အတွင်း၌အသံကိုရှာရန်လာရန်လာသည်။
နေ၏လမ်းကြောင်းသည်လူသားတို့၏ဘဝကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သေချာသည် - ကောင်းကင်သည်တောက်ပသည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်မရေမတွက်နိုင်သောနှစ်များတစ်လျှောက်တွင်သင်ကြားပေးခဲ့ပြီးမသိရသည့်ကာလများအတွင်းဆက်သွားနိုင်သည်။ လူသား၏ဘ ၀ တစ်ခုလုံးသည်လေထုတမျှသာဖြစ်ပြီးအချိန်တန်လျှင်လျှပ်တစ်ပြက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလင်း၊ ပြည့်စုံစွာဝတ်ဆင်ထားသောဝတ်စုံတစ်ချောင်းသည်ပြုတ်ကျပြီးအချိန်ကာလအနည်းငယ်တွင်စင်မြင့်ပေါ်သို့ပြသသည်။ နောက်တဖန်မပေါ်လာရ။ သူသည်လာ၏။ သူဖြတ်သန်း - ဘယ်မှာလဲ လူသည်ငိုရန်၊ ရယ်ရန်၊ သည်းခံရန်နှင့်ပျော်မွေ့ရန်၊ ချစ်ရန်အတွက်မွေးဖွားခြင်းလော။ လူသား၏ကံကြမ္မာသည်သေခြင်းအမြဲဖြစ်သင့်သလော။ သဘာဝတရား၏ဥပဒေများအားလုံးသည်တူညီသည်။ ကြီးထွားလာနေသောမြက်ပင်အပင်တွင်နည်းလမ်းရှိသည်။ သို့သော်မြက်ပင်သည်မြက်ပင်ဖြစ်သည်။ လူသည်လူဖြစ်သည်။ မြက်ပင်သည်ကြီးပွား။ ညှိုးနွမ်းတတ်၏။ နေရောင်ခြည်နှင့်နှင်းခဲများကိုမမေးခွန်းထုတ်ပါ။ လူသည်သူခံစားနေရစဉ်၊ ချစ်မြတ်နိုးပြီးသေဆုံးစဉ်အတွင်းမေးခွန်းထုတ်သည်။ သူကဖြေကြားမခံရလျှင်အဘယ်ကြောင့်သူမေးမြန်းသင့်သနည်း အမျိုးသားများသည်ခေတ်များတစ်လျှောက်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြသည်။ မြက်ပင်၏မြည်သံကိုပဲ့တင်ထပ်နေသည့်အဖြေထက်မပိုပါ။ သဘာဝတရားသည်လူကိုမွေးဖွားစေပြီး၊ ထို့နောက်သူသည်အခက်အခဲများ၊ သေခြင်းများနှင့်လျော်ကြေးပေးသည့်ပြစ်မှုများကျူးလွန်ရန်ဖိအားပေးသည်။ ဖြိုဖျက်ရန်နှင့်ဖျက်ဆီးရန်ကြင်နာသောသဘောသဘာ ၀ ရှိရန်လိုအပ်ပါသလား။ ဆရာများကကောင်းမကောင်း၊ အမှားအမှန်ကိုပြောကြသည်။ ဒါပေမယ့်ဘာကောင်းတာလဲ။ ဘာမကောင်းလဲ ဘာမှန်လဲ ဘာမှားလဲ။ ဤတရားစကြဝuniverseာ၌ဥာဏ်ပညာရှိရမည်။ လူကိုမေးခွန်းမေးမြန်းခြင်းသည်အဖြေမရရှိပါ။ အကယ်၍ လူအားလုံး၏အဆုံးသည်သေခြင်းဖြစ်ပါက၊ ဤ ၀ မ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ဘဝ၏ပူဆွေးသောကရောက်ခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်နည်း။ လူသည်သေခြင်းတရားကိုအဆုံးတိုင်စေနိုင်မည်မဟုတ်ပါကသူသည်မသေနိုင်သောအဖြစ်ကိုမည်သို့အဘယ်အချိန်၌သိရှိနိုင်မည်နည်း။
ဆိတ်ဆိတ်နေတယ်။ ညနေခင်းနက်လာသည်နှင့်အမျှမြောက်ဘက်မှနှင်းများကျလာသည်။ သူတို့သည်အေးခဲနေသောလယ်ကွင်းများကိုဖုံးအုပ်ထားပြီးအနောက်ဘက်ရှိနေ၏သင်္ချိုင်းကိုဖုံးကွယ်ထားကြသည်။ သူတို့သည်ကမ္ဘာမြေကိုမြုံနေအောင်ဖုံးကွယ်ထားကာအနာဂတ်ဘဝကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ထိုအခါတိတ်ဆိတ်ထဲကလူသား၏မေးမြန်းမှုမှပြန်ကြားချက်လာပါတယ်။
အိုမြေကြီး၊ အိုပင်ပန်းသောမြေကြီး၊ ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောရာဇ ၀ တ်မှုများ၏သွေးစွန်းသောပြဇာတ်ရုံ! အိုဆင်းရဲသောသူ၊ မပျော်သောသူ၊ ကစားသောသူ၊ သင်လုပ်ရသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်း၏။ နောက်နှစ်ကျလာပြီ၊ ဘယ်သူသေလဲ ဘယ်သူနေလဲ ဘယ်သူရယ်မောနေတာလဲ ဘယ်သူငိုတာလဲ ဘယ်သူနိုင်သလဲ အဘယ်သူသည်ရှုံး, လုပ်ရပ်အတွက်ပဲအဆုံးသတ်? အပိုင်းတွေကဘာတွေလဲ။ ရက်စက်သောညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သူ၊ သူတော်စင်၊ အပြစ်ပြုသူ၊ သင် ၀ တ်ဆင်သောဝတ်စုံများ၊ ဘဝ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ပြသမည့်နောက်ဆက်တွဲပြသမှုတစ်ခုစီ၌ပြောင်းလဲနေသောမြင်ကွင်းများဖြင့်ပြောင်းလဲပါလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်ကသရုပ်ဆောင်အဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိသည် - သရုပ်ဆောင်အနည်းငယ်သာကောင်းမွန်စွာကစားနိုင်ပြီးသူတို့၏အပိုင်းများကိုလည်းနည်းပါးလာသည်။ သင်နှင့်အခြားသူများ၏လျှို့ဝှက်ထားသောဝှက်ထားသောမင်းသား၊ သင်၏အပိုင်း၏ ၀ တ်စုံများ၌သင်ကစားနေသည့်အပိုင်းများ၌လုပ်ခတစ်ခုစီအတွက်ပေးချေမှုကိုမပေးမချင်း၊ သင်၏အချိန်အပိုင်းအခြားသို့သရုပ်ဆောင်ရမည်၊ ပြဇာတ်ကနေလွတ်လပ်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။ ဆင်းရဲသောသူ! အရမ်းစိတ်အားထက်သန်သို့မဟုတ်ဆန္ဒသရုပ်ဆောင်! သင်မသိသောကြောင့်မပျော်၊ သင့်အပိုင်းကိုသင်မသင်ယူသောကြောင့်၊ အတွင်း၌သီးခြားရှိနေသည်။
လူသည်သူအမှန်တရားကိုရှာဖွေနေသည့်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောပြသော်လည်းသူသည်အမှားများမှရှောင် လွဲ၍ မရပေ။ Man သည်အလင်းကိုအသံကျယ်စွာခေါ်သော်လည်းအလင်းအမှောင်မှသူ့ကိုခေါ်ဆောင်လာသောအခါပျောက်သွားသည်။ လူသည်မျက်စိမမြင်၊
လူသည်အရာခပ်သိမ်းကိုမြင်သောအခါအလင်းသည်ကောင်းမကောင်းကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ သူ့အတွက်ဘာလုပ်သင့်သည်၊ ကောင်းသည်၊ မှန်သည်၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အခြားအရာအားလုံးသူ့အတွက်မကောင်းဘူး၊ မှားတယ်၊ အကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာဖြစ်ကုန်အံ့ရပါမည်။
မြင်သောသူသည်မြင်လိမ့်မည်။ သူ၏အလင်းသည်သူ့ကို“ မဟုတ်ပါ”၊ “ ဖြစ်ပါစေ”၊ “ ဒါကအကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူး” လို့ပြလိမ့်မယ်။ လူက“ မဟုတ်ဘူး” ကိုဂရုပြုပြီး“ ဟုတ်တယ်” လို့သိရင်သူ့အလင်းက“ ဟုတ်တယ်၊ ဤအရာ၊ ဤအရာသည်အဘယ်သို့သောအရာဖြစ်သနည်းဟုမိန့်တော်မူ၏။ ထိုအလင်းကိုမမြင်ရလျှင်၊ လူသည်မြင်လို။ လိုက်နာလိုသောအခါမည်သည့်လမ်းကိုသိသနည်း။
လူသည်မျက်စိကန်း၊ နားပင်း၊ စကားမပြော၊ သို့သော်လည်းထိုသူသည်မြင်။ ကြားလျက်၊ လူသည်မျက်စိကန်း။ အလင်းကိုမြင်လျှင်မှောင်မိုက်သို့သွား၏။ သူသည်နားမကြားသူဖြစ်ပြီးသူ၏အာရုံကိုနားထောင်ကာနားကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ သူကမျက်စိမမြင်၊ နားမကြားတဲ့အတွက်စကားမပြောနိုင်ဘူး။ သူက Phantoms တွေ၊
ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အကွယ်အကာမရှိဘဲ၊ လူကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းသည်အစစ်အမှန်ထံမှပုံသဏ္ဌာန်ကိုမဖော်ပြနိုင်ပါ။ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည်မိမိတို့အဘ၏ဂုဏ်အသရေကို၎င်း၊ နားကြားသူသည်အသံများကို ခွဲခြား၍ မရပါ။
လူသည်အလင်းထဲကိုကြည့်မည်၊ သူသည်မှန်သောစကားကိုနားထောင်မည်ဆိုလျှင်ကြားရန်သင်ယူလိမ့်မည်။ သူသည်မြင်သောအခါကြားသည့်အခါမိန့်ခွန်းပြောပိုင်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်။ လူသည်အာဏာကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာမြင်မြင်၊ ကြား၊ စကားပြောသောအခါသူ၏အလင်းသည်မအောင်မြင်ဘဲမသေနိုင်သောအဖြစ်ကိုအသိပေးမည်။